व्यावसायिक खेतीमा बढ्दो आकर्षणः कराेडपति बन्ने सपना भयाे पुरा !
विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्ने अपेक्षा
| 2018-06-29 Published
निर्माण सञ्चार, कर्णाली प्रदेश । स्वदेशी रोजगारी नपाउँदा लाखौँ नेपाली युवायुवती विदेशमा रोजगारीका लागि भौँतारिएका छन् । स्वदेशमै उद्यम गर्न सके राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेको अवस्था छैन ।
खाली विदेशमा राम्रो पारिश्रमिक पाउने बानीले गर्दा स्वदेशको माटो बाँझो हुन थालेका छ । स्वदेशममै उद्यम गरेर
उदाहरणीय काम गरेका व्यक्तिहरु पनि धेरै छन् । विहान बेलुकाको छाक टार्न र एक आङ लत्ता लगाउनका लागि स्वदेशको उद्यम व्यवसाय नै काफी छ । तर पनि हाम्रा युवायुवतीप्रति विदेशको मोह बढिरहेको छ ।
स्वदेशमै समृद्धिको सपना सजाउन सके हरेक कुरा सम्भव हुनेमा विश्वस्त छन् जुम्लेली किसान दाजुभाइहरु । जुम्लामै बसेर विगत पाँच वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका कृर्षक कर्ण हमालल पहिला कसरी तरकारी खेती गर्ने ? कहाँ बेच्ने ? भन्ने विषयमा अलमल हुन्थ्ये ।
विस्तारै आधुनिक खेतीका बारेमा पाउँदै गएपछि तरकारीबाटै राम्रो आयआर्जन गर्न सकेको बताउँछन् । पहिला तरकारी खेती गर्न झन्झट मान्ने उनका परिवार अहिले ज्यान दिएर तरकारी खेतीमा लागेका छन् । उनको परिवार रातदिन नभनी खेतबारीमै काम गर्छन् ।
टमाटर, प्याज, आलु, खुर्सानी, काँक्रा, काउली गाँजरलगायतका तरकारी कर्ण हमालका बारीमा बाह्रैमास फल्छ । उनी बिहानै उठेर कुडारीबाट पश्चिम पर्ने नाग्म, रारा, त्रिवेणी तथा पूर्वको जुम्ला सदरमुकाम, एैरेनी, तातोपानी बजारमा बेच्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
कुनै पनि खेती, व्यवसायलाई व्यवसायीकता बनाउन सके मनग्य आम्दानी गर्न सकिने उनले बताए । हमालले भने, ‘५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यक्तिगत तरकारी खेती गरेको छु ।’
उनले थपे, ‘अहिले वार्षिक रुपमा सबै खर्च कटाएर ३ लाख बचत हुन्छ । पहिला केही रकम कामदारहरुमा खर्च हुन्थ्यो ।’
विकास परियोजनाले हाते टयाक्टर सहयोग गरेपछि ज्यालाको रकम पनि बचतमै जोडिएको बताए । तरकारी खेती गरेर लाखौँ रकम लिइसकेका कृषक कर्ण हमाल आफूले अब तरकारी बेचेरै करोडौँको मालिक बन्ने सपना देखेको बताउँछन् ।
हमालले भने, ‘पहिला वार्षिक हजारमा कमाउन्थे, अहिले लाखमा छु ।’
उनले थपे, ‘अब मेरो लक्ष्य करोडपति हुने भएको छ ।’ प्रविधियुक्त तरकारी खेतीमा जोड दिँदै, विभिन्न शहरमा जुम्लाको अर्गानिक तरकारी पठाउने उनले अठोट गरेका छन् ।
व्यवसायीक खेतीमा आर्कषण
तिला गापा ३ का कर्ण हमालको सफल्तासँगै कुडारीका ३० जना बढी स्थानीयले एकैसाथ तरकारी खेती गर्न थालेका छन् ।
व्यवसायिकताले हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो उचाइमा पुर्याउने भन्दै यहाँका किसान दाजुभाइ व्यवसायिक तरकारी खेतीतर्फ आर्कषित भएका छन् ।
बिहानबेलुका खाने मात्रै नभई तरकारी खेतीलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने प्रयासमा जुम्ला तातोपानी ३ का किसान लागि परेका छन् ।
तरकारी व्यवसायबाट करोडपति हुन ढिला नलाग्ने कृर्षक कालिबहादुर बुढाले बताए ।
अर्का किसान प्रदिप रावलले भने, ‘पानी भएको ठाउँमा पनि विकास परियोजनाले साना सिँचाई प्राविधिक जडान गरेको जसले तरकारी खेती गर्न सहज भएको छ । अब सानोतिनो खेती गदैनौँ । व्यवसायीकतालाई जोड दिन्छौँ ।’
सामुहिक तरकारी खेती लगानी
झण्डै २० रोपनी जग्गा लिचमा लिएर सामुहिक तरकारी खेती सुरु गरेको कृषक दिपेन्द्र हमालले बताए । २ लाख प्रति व्यक्ति लगानी गरेका छन् । पाईप, आवश्यक प्रविधि, बिउ विकास परियोजनाले सहयोग गरेको छ । पाँच जनाले गरेको सामुहिक तरकारी खेती कुडारीमै नमुना बन्ने आशा उनिहरुको छ ।
कर्ण हमालको आम्दानी देखेर हामीलाई पनि तरकारी खेती गर्न अभिप्रेरित गरेको अर्का किसान पदम भट्राईको दाबी छ ।
कर्ण हमालको अगुवाईमा दिपेन्द्र हमाल, पदम भट्राई, लाल बहादुर भट्टराई र जयलाल भट्टराईले सामुहिक तरकारी खेती गरेका हुन ।
विकास परियोजना सहयोगी
जुम्लेली किसानलार्इ करोडपतिको सपना देखाउने विकास परियोजना नै हो । जुम्लाका अधिकांश किसान छन् ।
स्वदेशमै गरे सुन फलाउन सकिने सन्देश पनि विकास परियोजनाले दिएको कृर्षक देविकन्या भटट्राईले बताइन ।
जुम्लाका गाउँमा गाउँमा तरकारी खेती भइरहेका छन् ।
भट्टराईले भनिन, ‘सफल बन्ने किसानमा निर्भर रहने कुरो हो । तर विकास परियोजानको सफलता नै जुम्लाको किसानको आयस्तरमा आएको परिवर्तन भएको छ ।’
उनले थपिन, ‘हामी अझै आबश्यकतामा आधारित कुराहरु सिकाउने गरेका छौ । किसानको माग अनुसार काम गर्नेछौँ ।’
उत्पदित तरकारीको बजारीकरण तथा आयस्तरमा वृद्धिका लागि पनि बेला बेला बहस गर्ने गरेको बताए । कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो अभियानमा कृर्षक जागरुक भएर लागेको प्रति खुसी व्यक्त गरे ।
राष्ट्रियस्तरमा काम गर्ने पत्रकारहरुद्धारा विभिन्न योजनामा गरिएको संयुक्त अनुगमनबाट विकास परियोजनाले गरेका कामबाट यहाँका किसान आत्मनिर्भर बन्दै गएको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशबाट सागर परियारकाे रिपाेर्ट
शुक्रबार १५, असार ०७५
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘निर्माण व�...
साँढे ६ हजार रूख काट्न सके वैशाखदेखि प...
निर्माणधीन विराटनगर भन्सार जाँचचौकी�...
४ महिनामै साढे ४ खर्ब व्यापार घाटा !...
घट्यो स्याउ निर्यातः बगैंचा बढे, उत्प...
‘ठगी’ गर्ने लेखा अधिकृत नै असारे विका�...
कर दिवसमा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, ब�...
विश्व बैंकसँग १५ करोड डलर सम्झैताः सह�...
पेट्रोल पम्पमा यस्तो छ ठगीको श्रृङ्ख�...
सेयर बजार गयो अनलाइन सिस्टमा: कसरी गर्...
पहिलो चौमासिक नसकिदै अर्थमन्त्रीले भ...
रौतहटमा खुल्न थाले धमाधम ठूला उद्योग !...
दैनिक ३ अर्ब ८८ करोडको व्यापार घाटा !...
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकटः लगानीयो...
आपूर्ती कम्पनी बन्दैः नेपाल खाद्य सं�...
चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.९ प्...
सरकार, यही चालले कसरी हुन्छ विकास ? ...
घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितलाई सहुल�...
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुकै खिचातानील�...
जुम्ली स्याउबाट लाखौं बुझ्न थाले किस�...
हुँदैछ जुम्लामा लगानी सम्मेलनः लगानी...
कुकुरमा समेत कर ! ढाड सेक्ने करले नागर�...
बढी नियन्त्रणले कसरी ल्याउँछ समृद्धि ? ‘इन्जिन बन्द गरेर जर्किनमा इन्धन बोकाएर सम्भव छ समृद्धि ?’
सार्वजनिक संस्थानमा यस्तो छ भ्रष्टचारका शृंखला
स्क्याफ र अबको बाटोः ‘गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि गुणस्तरीय परामर्श सेवा’ नै हाम्रो मोटो हो– महासचिव सापकोटा
कर्णालीमा भर्ना अभियान औपचारिकता मात्रै
प्रधानमन्त्री द्वारा ‘पानीजहाज कार्यालय’ उद्घाटन
रेडपाण्डाको ४३ % बासस्थान कर्णालीमा
भेडीगोठमा भिषण आगलागी सयौ भेडाबाख्रा जले, ९ लाख क्षति
उच्च शिक्षासम्म पुग्दैनन् कर्णालीका किशोरी
ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघले माग्यो ‘तालिमका लागि जग्गा’
‘साहसिक’ पर्यटन व्यवसायी प्रधानको टिटिडिसी अध्यक्षमा उम्मेदवारीले नयाँ तरंग
सिक्टा सिँचाइ प्रकरणः ४ करोड धरौटीमा छुटे निर्माण उद्यमी पाण्डे
‘तथ्य तोडमोड’ भएको भन्दै इआरएमसीको आपत्तिः यस्तो छ खण्डन
गोपाल खड्काले कस्तो दिए बयान ? ‘भ्रष्टाचार’ गरेको कति रकम दिए विप्लव माओवादीलाई ‘दान’ ? किन पाले विप्लवलाई उनले ?
साना उद्योगीका सामानको मार्केटिङ गर्न राजदूतहरु तयार
द्रुतमार्ग चार किलोमिटर घट्यो, सुरुङ बढ्यो
जनता आवास घर कृषकलाई कहरः ऋण तिर्न कालापहाड !
मुलुकी अपराध संहिताबारे निर्माण क्षेत्रको एक्लाएक्लै दौड, ‘ल्हासा जाने कुत्तीको बाटो’ !
पियु तालाबन्दी पेचिलो बन्दैः ‘विवादास्पद’ झा दैलो चाहर्दै, अदालत जाने आन्दोलकारीको तयारी
सांसद बस्नेतको पहल ‘गुण्डुमा आइपुग्यो सिंहदरबार’
बालकृष्ण समको ‘नियमित आकस्मिकता’ दर्शनमाथि विमर्श
नेइए बहसले खोजेको जवाफः ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कहिले हुन्छ ? कसरी हुन्छ ?’
भूकम्पले फेरिएका संरचनाः गाउँ गाउँमा ‘नमूना’ विद्यालय, आपत्कालिन ‘सेल्टर’ !
स्क्याफको २९औं जनरल बडी मिटिङको निष्कर्षः ‘परियोजनाहरुमा चेक एन्ड ब्यालेन्स मेकानिजम प्रभावकारी नहुँदा समस्या’